Xuquuq xag iskuul iyo xag daryeel | På blodigt allvar
Halkaan waxaan ku soo uruurinay waxyaalo ay wanaagsan tahay inaad ka ogaato xuquuqdaada xagga iskuulka iyo markaad raadsaneyso daryeel.
Xuquuqdaada xag iskuul
Iskuulka wuxuu sharcigu farayaa inuu ka taliyo sinnaanta xuquuqda iyo fursadaha ee carruurta iyo ardayda. Caadada xaggeeda taas micneheedu waxay tahay in iskuulku uu ka taliyo in caadadu aysan caqabad ku noqon dhigashada iskuulka. Waa inay jiraan musqulo iyo fursado, marka loo baahdo, la isaga beddelo suufka caadada. Waxaa iyana wanaagsan inay jiraan kiniin xanuunka dejiya iyo suuf caadada loo xirto oo marka xaalad degdeg ah ay jirto ardayda loo qeybiyo.
Daryeelka caafimaad ee iskuulka
Waaxda caafimaadka ardaydu waa inay gacan ka geysato abuurka jawi iskuul oo u wanaagsan caafimaadka ardayda. Waxey iyana noqon kartaa meel caqabadaha caadada caawimo looga raadsado. Ardayga iskuulka dhigtaa waa inuu iskuulka kula kulmi karo kalkaaliso caafimaad, takhtar, cilminafsi-yaqaan iyo la-taliye cilminafsi.
Haddaad iskuulka tusaale ahaan caado-xanuun xooggan la joogi weydo waxaad xaq u leedahay inaad iskuulka taageero ka hesho, waa xilkooda inay hubsadaan inaysan waxbarshadaada ku dhaafin. Taasi waa hadday jirto khatar ah inaad shahaado la qaadan weydo baaqashada aad iskuulka ka baaqaneyso darteed. Waxaad tusaale ahaan heli kartaa caawimo dheeraad ah si aad adigoo gurigaaga jooga aad ula qabsato waxbarashada iskuulka.
Dammaanad daryeel caafimaad
Isla maalinta aad soo xiriiriso daryeelka waa inaad heshaa fursad aad ku haleesho rug caafimaad ama talobixin daryeel caafimaad. Dabadeed waa inaysan 7 cisho ka badan xilliga aad kulan ku heleysid takhtar. Haddaad u baahato inaad la kulanto takhtar taqasus gaar ah leh, takhtar khabiir ku ah dhibaatooyinkaaga, waa inaad taas ku heshid 90 cisho gudahood. Taas ayaa ah waxa la yiraahdo dammaanad daryeel. Waxaad iyana ka billaabi kartaa inaad la xiriirto xarunta dhallinyarada ama kalkaalisada iskuulka. Iyaga ayaa dabadeed ku sii hagi kara.
Xaq u yeelasho warbixin
Bukaansocod ahaan waxaad xaq u leedahay in lagaaga warbixiyo daryeelka iyo dabiibka jira. Waxaad iyana xaq u leedahay inaad hesho warbixin aad iskaaga u fahmi kartid. Mar kasta ayaad takhtarka ama kalkaalisada weydiin kartaa, hadday jiraan wax aadan fahansanayn, inay mar kale kuu qeexaan. Hadday jiraan habab kala duwan oo lagugu dabiibi karo waxaad xaq u leedahay inaad iskaaga mid u doorato.
Mas’uulyad sirxajin micnaheedu wuxuu yahay in shaqaalaha daryeelku ay ka mamnuucan yihiin inay cid kale uga warramaan daryeelkaaga, ballantaada ama waxa aad ka wada hadleysaan. Dhammaan dadka ka shaqeeya daryeelka iyo farmashiyeyaalka waxaa saaran mas’uulyad sirxajin.
Haddaadan Iswiidhishka fahmeynin ama aad ku hadasho luuqadda dhegoolka waxaad, marka aad la hadleyso shaqaalaha daryeelka, xaq u leedahay inaad turjubaan heshid. Marka aad la hadleyso dadka ka shaqeeya rugta caafimaadka, talobixinta daryeelka ama xarunta dhallinyarada waa inaad u sheegtid inaad turjubaan u baahan tahay. Turjubaannada waxaa iyana saaran mas’uulyad sirxajin.
Daryeelku mar walba uma shaqeeyo sida loogu talogalay
Haddaad u aragto inaan lagu dhegeysaneynin, aadan heleynin caawimo kugu habboon ama aad daryeel sugeysay muddo aad u dheer waxaad haddana waci kartaa ama mail u diri kartaa xarunta daryeelka. Xusuusi inay xuquuqdaada tahay inaad caawimo heshid, una sheeg muddada aad sugeysay. Haddaadan ku qanacsanayn daryeelka aad heshay, waxaad had iyo jeer xaq u leedahay inaad takhtar kale raadsatid. Haddii dhibaatooyinkaaga ay ku roonaan waayaan daryeelka waa inaad haddana baaritaan hor leh raadsataa.
Wakiilka xagga takoorka (DO)